जापानको यात्रा गर्दा यी शिष्टाचार नियमहरूको पालना गर्नुहोस्
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » गेस्टपोस्ट » जापानको यात्रा गर्दा यी शिष्टाचार नियमहरूको पालना गर्नुहोस्
अप्रिल 26, 2021
जापान यात्रा शिष्टाचार
जापान भ्रमण गर्न मनमोहक ठाउँ हो, विशेष गरी यसको मैत्री र स्वागत गर्ने स्थानीयहरूको कारण। जहाँसम्म, हामी बुझ्दछौं कि तपाईं अनजानमै तपाईंको भ्रमणको क्रममा केही नियमहरू तोड्दा चिन्तित हुन सक्नुहुन्छ। सबै पछि, तपाईं तिनीहरूको चलन र परम्पराको बारेमा पूर्ण जानकारी हुनुहुन्न। र धेरै जसो केसहरूमा यसले केहि अविश्वसनीय वा अप्ठ्यारो वा लाजमर्दो अवस्था निम्त्याउन सक्छ।
यस ब्लग पोष्टमा हामी केहि उत्कृष्ट सुझावहरू साझेदारी गर्दैछौं ताकि तपाईं सजिलैसँग भीडसँग मिसाउन सक्नुहुनेछ जब टोकियो वा क्योटो भ्रमण गर्दा।
Hush! सार्वजनिक यातायातमा शान्त रहनुहोस्
यहाँ सल्लाहको एक महत्त्वपूर्ण शब्द छ। जब तपाईं जापानमा सार्वजनिक यातायात लिनुहुन्छ केही जोरले नगर्नुहोस्। सार्वजनिक यातायात मा यात्रा गर्दा शोर हुनु को लागी जापानीहरु लाई असभ्य लाग्छ। यसैले सावधान हुनुहोस् तपाईले आफ्ना साथीहरूसँग ठूलो स्वरले कुरा गर्नुहुन्न, फोनमा च्याट गर्नुहुन्न, वा हेडफोनको माध्यमबाट संगीत विस्फोट हुन नदिनुहोस्। यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने, धेरै सावधान हुनुहोस् जब तपाईं आफ्नो मोबाइल द्रुत कल गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। जापानीहरूले सार्वजनिक यातायातलाई सबै दिन पसीना पछाडि पछाडि झुण्ड्याउन ठान्छन्; तिनीहरूले शूल यात्रीहरूले उपद्रव फेला पारे।
थप रूपमा, त्यहाँ अन्य नियमहरू छन् सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दै तपाईंले विचार गर्नु पर्छ। जब बसिरहेको बेला आवश्यक भन्दा बढी ठाउँ होग नगर्नुहोस्। यसबाहेक, तपाईंले बोर्ड गर्नु भएको ट्रेन कारहरूको रंगमा ध्यान दिनुहोस्: जापानमा विशेष गरी महिलाहरूको लागि निर्दिष्ट कारहरू छन्।
जापानमा गो मा खाँदै छैन
धेरै भन्दा धेरै Million मिलियन भेन्डि machines मेशिनहरू जापान भर फैलिएका छन्। यो आकर्षक, सही लाग्छ? यात्राको क्रममा तपाईको भोक मेटाउन सजिलो छ किनकि तपाइँले जब चाहानुहुन्छ दंश लिन सक्नुहुन्छ। जे होस्, तपाईंले खाली कन्टेनरहरू दायाँ फोहोर बिन्हरूमा टस गर्नु पर्छ रणनीतिक रूपमा भेन्डि machines मेशिनहरूको छेउमा राखिएको। तपाईंले याद गर्नुपर्दछ कि सार्वजनिक यातायातमा खाने वा पिउने जापानमा पूर्ण रूख मानिन्छ। तपाईं, तथापि, लामो दूरी यात्रा गर्दा खाना लिन सक्नुहुन्छ।
एस्केलेटर नियमहरूमा टाँसिनुहोस्
यदि तपाईं न्यूयोर्क वा लन्डन जस्ता सघन जनसंख्या भएको शहरबाट हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई केहि नियमहरू बारे सचेत हुन सक्छ। जापानमा एस्केलेटर लिनको लागि त्यहाँ खास नियमहरू छन्, र जापानीहरू ज्यादै अनुशासित छन्, तपाईंले तिनीहरूलाई जता जता पनि यी नियमहरूको पालना देख्नुहुनेछ। यदि तपाईं उभिन चाहनुहुन्छ भने, एस्केलेटरको बाँया पट्टि राख्नुहोस्। हिंडाई राख्न, यसको दायाँ-पट्टि रहनुहोस्। यदि यो छिटो दायाँ-पट्टि छ भने, यसलाई हेर्नुहोस् जुन तपाईलाई पछि लाग्नको लागि पछाडि कोही छैन। तपाईं मान्छे को लामो लाइन को लागी समाप्त हुन सक्छ भन्ने आशामा कि तपाईंले तिनीहरूलाई पार गर्न दिनुहुनेछ किनकि उनीहरू भूतपूर्व धक्का दिन एकदमै शिष्ट छन्।
जापानमा ट्याक्सीहरू कसरी संचालन गर्छन् सावधान हुनुहोस्
जापानमा सार्वजनिक यातायात पूर्वाधार शीर्ष-पायदान हो, र हामी तपाईंलाई जापानमा नभएसम्म यसलाई प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छौं। जहाँसम्म, तपाईं अझै पनी समाप्त हुन सक्छ ट्याक्सी लिनुहोस्। जापान यसको प्राविधिक पराक्रमका लागि प्रख्यात छ। यसका ट्याक्सीहरूले देशले बनाएका शानदार प्राविधिक प्रगतिलाई पनि देखाउँछन्। जबसम्म तपाईं समूहमा हुनुहुन्न, ट्याक्सीको पछाडि सिटमा बस्नुहोस्। त्यो तपाईं सामान्यतया के गर्नुहुन्छ, हैन? होल्ड गर्नुहोस्, यहाँ समात्नुहोस्। यहाँ ट्याक्सी ढोका यात्रुहरूका लागि स्वत: खोलिन्छ। ढोका आफैं खोल्न प्रयास नगर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले हप गर्नुभयो भने चालकले ढोका बन्द गर्नेछ।
सुरक्षा तपाईको शीर्ष प्राथमिकता हो
यात्रा गर्दा, तपाईले नेभिगेट गर्न मद्दत गर्न तपाईको फोन जाँच गर्नु पर्ने हुन्छ। होटलमा फिर्ता, तपाईं आफ्नो ल्यापटप केहि काम गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको मनपर्ने शोको नयाँ एपिसोड स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। यी दुबै कार्यहरूलाई इन्टरनेट जडान चाहिन्छ। रोमि charges शुल्क धेरै महँगो हुन सक्छ। यसैले, तपाइँ कसरी आफ्नो यात्रा को लागी यति उच्च लागत लाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ? ठीक छ, तपाईं एक स्थानीय सिम कार्ड किन्नुहोस् जुन तपाईंको आधारभूत आवश्यकताहरूको लागि पर्याप्त हुनुपर्छ। अवश्य पनि, तपाईं सार्वजनिक Wi-Fi हटस्पटमा टाँस्न सक्नुहुन्छ जुन जापानले नि: शुल्क प्रस्ताव गर्दछ। पश्चिमी शैलीको होटलहरूमा, Wi-Fi नि: शुल्क प्रदान गर्न सकिन्छ। यद्यपि उच्च-अन्तका होटलहरूलाई इन्टरनेट पहुँचको लागि भुक्तान आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईं अधिक दुर्गम क्षेत्रमा होटल वा रिसोर्ट छनौट गर्नुहुन्छ भने, वाइफाइ मात्र लबीमा उपलब्ध हुन सक्छ।
जबकि वाई-फाई केहि परिस्थितिहरूमा बचत अनुग्रह जस्तो देखिन सक्छ, यो तपाइँको सोच भन्दा बढी खतरनाक हो। केहि वाइफाइ हटस्पट पर्याप्त रूपमा सुरक्षित नहुन सक्छ, यसको अर्थ कोही कोही तपाईंको गतिविधिहरूमा स्नुप गर्न सक्दछ। यदि तपाईं यी समस्याहरूबाट आफैलाई बचाउने उद्देश्य राख्नुहुन्छ भने, यो प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्छ VPN अनुप्रयोग तपाईंको ल्यापटप, फोन, वा ट्याब्लेटमा। तपाईंको बहुमूल्य व्यक्तिगत र वित्तीय डाटा सुरक्षित रहन्छ जब तपाईं Wi-Fi मा जडान गर्नु अघि VPN जडान सक्षम गर्नुहुन्छ। जापान वा अन्य कुनै पनि देशको भ्रमण गर्न एक आनन्दित अनुभव हुनुपर्दछ र यो सम्भव छ जब तपाईं ह्याकि and र डाटा चोरी विरूद्ध पर्याप्त संरक्षण लिनुहुन्छ।
२०१ 39.1 मा विश्वको प्रत्येक कुनाबाट पूरै 2018 .XNUMX .१ मिलियन पर्यटकहरूले जापानको भ्रमण गरेका थिए, र यो अझै पनि धेरै यात्रुहरूको लागि सूचीको शीर्षमा छ। यो भ्रमण गर्नु अघि संस्कृति, इतिहास, स्थानीय चलन, र कुनै देशका व्यक्तिहरू बारे जान्न महत्त्वपूर्ण छ, र जापानको कुनै फरक छैन। जापानीहरु जो मानिसहरु को संस्कृति र परम्परा को सम्मान गर्न को लागी धेरै सराहना गर्छन्। जापानी मान्छेहरु लाई आशा छैन कि तपाइँले तिनीहरुको जीवनको तरीका बारे सबै कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। यद्यपि यदि तपाईले देश र यसको मान्छेलाई सम्मान गर्ने प्रयास देखाउनुभयो भने तपाई निश्चित रुपमा धेरै माया र सराहनाका साथ प्रदर्शन हुनुहुनेछ। हाम्रो सुझावहरूले तपाईंलाई जापानमा राम्रोसँग राम्रोसँग पुग्न मद्दत गर्दछ। तपाईंको झोला प्याक गर्नुहोस् - 'उदाउँदो सूर्यको भूमि' ले तपाईंलाई स्वागत गर्दछ!